भात खाँदा बढ्छ तौल, थाहा पाउनुस् साँचो हो कि गलत ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
भात खाँदा बढ्छ तौल, थाहा पाउनुस् साँचो हो कि गलत ?
जेठ १२ गते, २०७२ - १८:०६
भातको विषयमा थुप्रै प्रकारको भ्रामक धारणाहरु छन् जसमा बारेमा जान्न अत्यावश्यक छ । संसारभरीको आँकडालाई हेर्ने हो भने धेरैजसो मानिसहरु बिहान– बेलुका भात नै खाने गर्दछन् । सबैभन्दा दिर्घायु भएको देश जापानमा पनि मानिसहरु मुख्य रुपमा भात नै खाने गर्दछन् । आउनुहोस्, थाहा पाऔँ भातको बारेमा केही भ्रम र त्यसको वास्तविकता–
भ्रमः यसमा कार्बोहाइड्रेट मात्र पाइन्छ:
तथ्यः भातमा कार्बोहाइड्रेटका साथै जिंकको मात्रा पनि हुन्छ जसले शरिरलाई स्वस्थ राख्ने गर्दछ ।
भ्रमः भात खाँदा तौल बढ्छः
तथ्यः यदि भात सहि मात्रामा खाने हो भने यसले थुप्रै रोगबाट लड्ने क्षमतामा वृद्धि गर्दछ । चामलमा स्टार्च र भिटामिन हुने भएकाले यसलाई पकाउनुभन्दा अघि पटक–पटक धुनु हुँदैन ।
थुप्रै प्रकारले उपयोगीः
चामलमा मूगीको दाल हालेर जाउलो बनाएर खाँदा दिमागको विकास हुने गर्दछ । कार्बोहाइड्रेटका कारण यसलाई उर्जाको राम्रो स्रोत मानिन्छ । भातमा दुध र चिनी मिसाएर खाँदा पेट सफा हुन्छ । माइग्रेन भएकाहरुले सुत्नुभन्दा अघि भातमा मह मिसाएर खाँदा फाइदा पुर्याउँछ ।
जेठ १२ गते, २०७२ - १८:०६ मा प्रकाशित